Moto G4 Plus Vs Moto G5 Plus, mmalite. | Gam akporosis
Ọ bụ otu n'ime nkwupụta ọkwa na atụ anya nke MWC 2.017 a. Mmeghari ohuru nke otu ihe di nkpa na etiti. Ọ bụghị n'efu kemgbe afọ ke «top ise» nke smartphones nwere uru kachasị mma maka ego.
Motorola Moto G, na ụdị ya niile, abụrụla ọkachasị kemgbe ọ pụtara n’ahịa. Ya mere, ụlọ mmanya ahụ dị oke elu. Ma enwere obere nrụgide na onye ọhụụ a Moto G5 Plus ma ọ bụrụ na ọ na-ezube ibi ndụ dị ka onye bu ya ụzọ. Ọ ga-aga nke ọma?
1 Moto G5 Plus ga - ejikwa Moto G4 Plus?
2 Kedu ihe mgbanwe ndị ahụ dị?
Moto G5 Plus ga - ejikwa Moto G4 Plus?
Olee otu o si eme Mgbe mbipụta ọhụrụ nke smartphone pụtara na ahịa, atụnyere atụnyere atụnyere. Lelee akụkọ, mmalite na ndozi nke ọhụrụ na-eweta n'ihe metụtara ihe anyị maara. Ọ bụ ya mere taa na Androidsis anyị ga-egosi anyị ọdịiche dị n'etiti Moto G Plus abụọ ahụ.
Na ileba anya mbu enwere mgbanwe ndi putara ihe. Versiondị ọhụrụ nke Moto G5 Plus, oge a site na Lenovo, nzọ na mgbanwe imewe. Ihe na-adọta uche maka ọdịdị ya dị oke mma. Karịsịa n'ihi na e weere dị ka ndị quintessential "nnukwu" ekwentị ke ufọt ufọt nso.
Iji lelee mmezi, ma ọ bụ ọdịiche dị n'etiti otu ụdị na nke ọzọ, anyị na-egosi gị ya na anya. Na tebụl na-esonụ ị nwere ike ịhụ akụkụ nke Lenovo meziwanye Moto G na nzọ ọhụrụ ya. Anyị nwere ike ịhụ na mgbanwe na azụ site na plastik na ọla abụghị naanị otu.
Eke Motorola Motorola
Nlereanya Moto G4 Plus Moto G5 Plus
Usoro njikwa gam akporo 6 gam akporo 7
Ihuenyo 5.5 " 5.2 "
Nhazi Snapdragon 617 Snapdragon 625
Nchekwa 16GB 32GB
Batrị 3.000 mAh 3.000 mAh
Igwe n'ihu 5 Megapixels 5 Megapixels
Rear igwefoto 16 Megapixels 12 Megapixels
Kedu ihe mgbanwe ndị ahụ dị?
Fọdụ n'ime akwụkwọ ọhụụ nke ụdị ọhụụ nke Motorola Moto G5 Plus bụ ihe ịtụnanya. Mbelata nke ihuenyo gị dịka ọmụmaatụ bụ ịmata. Megide omume nke ọtụtụ ụdị nzọ na nha nke Moto G4 gara aga. Moto G5 na-ebelata ihuenyo ya, mana ọ bụ ihe Ọ na-arụ ọrụ iji melite, dịka ndị okike ya, imewe na njide nke ngwaọrụ ahụ.
Anyị ahụghịkwa mmelite ọ bụla na batrị ahụ, mana na ngbanwe nke nhazi ọ kwesịrị ịkwalite. Nkwenye 3.000 mAh na-agbatịkwu ntakịrị site na iji ngwaọrụ kachasị. Moto G5 Plus ọhụrụ a ọ ga - ahụ ọnọdụ ya n’ahịa? Na ileba anya mbu, ọ bụ ama anyị hụrụ n'anya ma anyị na-atụ anya ịnwale ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto G4 Plus Vs Moto G5 Plus, mmalite.
Onye German Dario Sanchez Roa dijo
Lenovo kwenyere na naanị site na ịhapụ otu afọ nke mmelite na motorola, ọ gafeela nzuzu, yabụ nokia ga-ada ala na ihe fọdụrụ ntụkwasị obi nye ndị Fans na ndị ahịa ya, Lenovo na-emere onwe gị ihu ọma ma ọ bụ mgbanwe maka ọdịmma. ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mmelite ma ọ bụ ndị ọjọọ M ga-eme ya na ihe niile mejupụtara nke ika IHE ghọrọ MEDIOCRE.
Zaghachi German Dario Sanchez Roa